တကမ္ဘာလုံးက ဖုန်းအချင်းချင်း ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ ဖုန်းခေါ်ကြရအောင်လား | တောရက်စ် (mc)
တကမ္ဘာလုံးက ဖုန်းအချင်းချင်း ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ ဖုန်းခေါ်ကြရအောင်လား
ဖုန်းတွေ အသီးသီး ရှိကြတယ်ဗျာ. ဖုန်းခေါ်ဆိုခတွေ အရမ်းများတယ်။ အဲ့တော့
ပိုက်ဆံမကုန်အောင် ဖုန်းပြောတာတို့၊ မြန်မာလို chat တာတို့၊ message
ပို့တာတို့ မလုပ်ချင်ဘူးလား။ အင်တာနက်ခက တစ်မိနစ်မှ2ကျပ်လား 20 လား
ပေးရတာပါ။ တန်ပါတယ်။ အဲ့လိုခေါ်ချင်ရင်တော့ အောက်က အချက်တွေနဲ့
ပြည့်စုံဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာကနေ ဟန်းဖုန်းကို
ဖရီးခေါ်ဆိုနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်နေပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့
လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက android phone(အတု-အစစ်ကဲ့သို့)
တစ်လုံးကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ စမ်းသုံးပြီး ဖုန်းခေါ်ဖို့အတွက် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့
activate လုပ်ဖို့က ရပြီ။ အဲ့ထဲကို install လုပ်ဖို့အဆင့်တစ်ဆင့်
လိုနေသေးလို့ လုံးဝ ထည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကဲဒါကထားပါ ကျွန်တော့်ဖက်က
မိမိဖုန်းဟာ iphone (or) android
(or) Black berry (or) window phone အဲ့အမျိုးအစား ၄ မျိုးထဲက
တစ်ခုခုဖြစ်ရပါမယ်။ (အခုအထိတော့ ဒီ ၄ မျိုးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နောက်ထပ်ပြီး
မိမိဖုန်းမှာ viber ဆိုတဲ့ free
ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ software Download လုပ်ဖို့နဲ့ install လုပ်ဖို့ internet
လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Download လုပ်ဖို့ခဲယဉ်းနေရင်လည်း ကျွန်တော်
တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ မပူပါနဲ့ memory card ထဲကိုသာ အဲ့ viber software
ထည့်ပြီး install လုပ်သွားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်မှာ samsung Android
အမျိုးအစား ရှိလို့ ကျွန်တော့်ဖုန်းကို ဥပမာထားပြီးတော့ ရေးသားလိုက်ပါ့မယ်။
မိမိကိုယ်တိုင် ဖုန်းမှာ အင်တာနက်ရှိလို့ပဲ
ဖြစ်ဖြစ်၊ wifi ရနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ အဲ့ဒါမျိုးဆိုခဲ့ရင်
ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းဆီကို ဖုန်းခေါ်ချင်ရင် အင်တာနက်
ကဖေးဆိုင်ကို သွားထိုင်ပြီး တစ်နာရီလောက် ဖုန်းပြောလိုက်ပေါ့။ အဲ့ကပေးတဲ့
wifi နဲ့ ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့။ အော်ဒါနဲ့ပြောဖို့ကျန်သွားပါတယ်။
အဲ့လိုခေါ်ဆိုဖို့အတွက် တစ်ဖက်ဖုန်းမှာလည်းပဲ viber software ရှိရပါမယ်။
အဲ့ဒါဆိုရင် သူ့ဖုန်းကို ကိုကခေါ်မယ်ဆိုတာနဲ့ သူကမေးပါလိမ့်မယ်. viber
နဲ့လား Dialer နဲ့လားပေါ့၊ Dialer ကိုရွေးမိရင်တော့ ငါးပါးမှောက်ပါမယ်။
oversea call နဲ့ပေးရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့ viber ကိုရွေးပြီး
ကိုခေါ်ချင်တဲ့သူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်လိုက်ပါ။ ဟိုဖက်က ဟန်းဖုန်းမှာ viber
နဲ့သွားမည်ပါလိမ့်မယ်. သူကလည်း ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာ တန်းသိပါတယ်။ ဟိုဖက်က
ခုနက ပြောတဲ့ iphone (or) android (or) Black berry (or) window phone
အဲ့အမျိုးအစား ၄ မျိုးမှာ အင်တာနက်ရှိနေခဲ့ရင် http://www.viber.com
ကိုသွားပြီး ကို့ဖုန်းအမျိုးအစားကို ရွေးပြီး Download လုပ်လို့ရသလို၊
Android ဖုန်းဆိုရင်တော့ Play store ကနေ အရင်နှိပ်ပြီး search box ထဲမှာ
viber လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ တန်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရွေးပြီးတော့သာ
download လုပ်လိုက်ပါ။ download လုပ်ပြီးတာနဲ့ install ကို သူ့ဟာသူ
လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ activate ဖြစ်ဖို့အတွက် မိမိရဲ့ နိုင်ငံနဲ့
ဖုန်းနံပါတ်ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ ရွေးပြီး OK နှိပ်တာနဲ့ ဖုန်းထဲကို message
ရောက်လာပါမယ်။ အဲ့ message ထဲက code ကို viber phone activate
ဖြစ်ဖို့အတွက် တောင်းတဲ့အကွက်ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် viber
ရှိသော မည်သည့် ဖုန်းကိုမဆို ခုခေါ် ခုပြောလို့ရသလို၊ message ပို့ရင်လည်း
ခုပို့ ခုရောက်ပါတယ်။ ကဲပြောမယ့်သူချည်းပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
အဲပြောဖို့တစ်ခုကျန်သွားပါတယ်။ play store (or) www.play.google.com ကို
၀င်ဖို့အတွက် google account လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိသုံးနေတဲ့ google account
နဲ့ ၀င်လည်း ရပါတယ်။ ၀င်လို့ရမှသာ application တွေကို ဖရီး Download
လုပ်ခွင့်ရကြမှာပါ။ apple က ထုတ်တဲ့ iphone နဲ့ ipad ကိုတော့ google ကနေ
မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ ခဏတာအတွင်း အသုံးပြုသူအရေအတွက်နဲ့ service ကောင်းကောင်းနဲ့
လုပ်ပြလိုက်ပြီဆိုတော့ apple အနေနဲ့တော့ နည်းနည်းမျက်ခုံးလှုပ်သွားမှာ
အမှန်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ iphone, ipad တွေကို ပြန်သုံးရဖို့အတွက်
jailbreak လုပ်ရလို့ပါပဲ။ android phone မှာ အဲ့ဒါတွေမလိုပါဘူး။
ကြိုက်သလိုသွား၊ ကြိုက်တာ install လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကဲအဆင်ပြေမယ်လို့
မျှော်လင့်ပါတယ်။ android သမားများအတွက် မရှာချင်ရင်တော့ အောက်မှာ
တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနက်ရှိတဲ့ဖုန်း၊
အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာကနေ ဖုန်းကတဆင့် ကျွန်တော့်ဖုန်းကို
လှမ်းဆက်လို့ရပါတယ်။ +66862735597 ပါ။ ရတယ်ဆိုရင် စမ်းခေါ်လိုက်ပါ။ phone
number ထည့်လိုက်တာနဲ့ ကို့သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ viber ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်
viber ပုံလေး ဖုန်းနံပါတ်နဘေးမှာ ပေါ်နေပါတယ်။ ဘယ်သူထည့်ထားလဲ
Posted by တောရက်စ် (mc) on July 7, 2012 in Mobile.
message မရောက်ဘူးဖုန်းထဲကို….code နံပါတ် လည်းမပေးဘူး…နားမလည်းဘူး….ဘာလို လို့လဲ မသိဘူး…ဒီမှာရေးထားတာ message ရောက်မယ်ဆိုလို့ စောင့်နေတာ မရောက်ဘူး.. code နံပါတ်ပဲ ရိုက် ခိုင်းနေတယ်…ရှိမှ မရှိသေးတာဗျာ..An acess code has been sent to you by SMS.Enter it below ဆိုပြီး Enter code here ပဲ ရောက်ရောက်သွားတယ်…အကိုပြောသလိုပဲ နိုင်ငံ ရယ်ဖုန်း နံပါတယ်ရယ် ရိုက်တာ
တောရက်စ် (mc) says:
အစ်ကိုပြောတာ ကျနော်သဘောပေါက်ပြီ ကိုယ့်ဖုန်းကမြန်မာဖုန်းဆိုရင် 09 402575127 ဆို +09402575127 ရိုက်ထည့်ပေးပါ Viber့ နေပြီး ကိုယ့်ဖုန်းကို ခေါ်ပြီး activation code ပြောပါလိမ့်မယ်.. သူပြောတယ် code ကိုရိုက်ထည့်ပြီး actiate လုပ်ပြီးရင် အဆင်ပြေသွားပါလိ့မ်မယ် မှတ်ချက် မြန်မာဖုန်းနံပတ်ဆို viber က တစ်ခါတစ်လေ မခေါ်ပါဘူး ..ကျနော့်တုန်းက ၂ပါတ်လောက်ကြာသွားပါတယ် activation ရဖို့ …:)
message ပြန်မာလတာကတော့ မြန်မာဖုန်းတွေ များသောအားဖြင့် ပြန်မလာပါဘူးဗျာ.. ဒါပေမယ့်ရှေ့ဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်..
Enter viber ဆိုတဲ့ခလုပ်လေးရဲ့ အောက်နားက click here ကိုနိုပ်ပါ web page တစ်ခုကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်.. Get Code ကိုနိုပ်လိုက်ပါ ချက်ချင်းဆိုသလို မိမိဖုန်းကိ နိုင်ငံခြား call တစ်ခု ၀င်လာပါလိမ့်မယ် ဖွင့်နားထောင်လိုက်ပါ.. code နံပတ်ပြောပါလိမ့်မယ်.. ပြောတဲ့ code ကို ဘောလ်ပင်နဲ့လိုက်မှတ်ထားပါ သူက နှစ်ခါ ပြန်ပြောလိမ့်မယ် ဒါဆိုရင် code ရပါပြီ viber ကိုပြန်ဖွင်လိုက်ပါ Enter code here မှာ ဖြည့်လိုက်ပါ ပီးလျင် Enter Viber ကိုနိုပ်လိုက်ပါ.. ခဏနေရင် အားလု့းပြီးသွားပါလိမ့်မ်.. အောင်မြင်သွားပါပြီ တကယ်လို့ သူပေးတဲ့ code ကို အကြော်ငးအများမျိုးကြောင့် မကားလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း စိတ်မပျက်ပါနဲ့ နောက် ၂၄နာရီကြာရင် တစ်ခါထပ်တောင်းလို့ရပါတယ်.. မရမချင်း 24 နာရီခြားတစ်ခါတောင်းပေါ့ဗျာ..
ဟုတ်ကဲ့အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ခုမှသဘောပေါက်တယ်…အကိုပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်က +09မထည့်လိုက်ဘူး…အဲဒါကြောင့်မရတာ.အပြည်စုံပါပဲအကို.. အောင်မြင်ပါစေ…..